CISSP Exam Prep – Dia manifakifa ny InfoSec fanadinana
CISSP dia fantatra eran fanamarinana ao amin'ny sehatry ny IT Fiarovana amin'ny fepetra hentitra anisan'izany ny 75% tahan'ny ny marina fanontaniana. Amin'ny fananganana ofisialy ny U.S. Department ny Fiarovana ao amin'ny Dodd 8570 fanamarinana sy ANSI ISO / IEC fankatoavana, ny CISSP fanendrena sarobidy mampiseho fanamarinana izay afaka hanampy anao mba hahazo na hiasa ao IT Sa.
Maherin'ny 93,000 olona voamarina in 149 firenena, ny CISSP dia eran-fitsipika ary indraindray asa ilaina ho toerana. Raha toa ianao ka mieritreritra mahazo ny CISSP fiantsoana, ny manaraka dia afaka manampy anao amin'ny lalan'ny ny fanamarinana.
Inona no CISSP?
Ny taratasy fanamarinana na Certified CISSP Information Systems Security Professional dia fiahian'ny fanamarinana izay milaza fa mety mpiasa mahay ianao hiasa ao amin'ny isan-karazany ny IT ary saha, amin'ny saha ao anatin'izany ny fiarovana mpanoro-hevitra sy ny mpitantana, IT talen'ny, mpandalina, rafitra injeniera, ary more.
Amin'ny fitiliana ho an'ny 8 sehatra sy ny 250 fanontaniana, dia betsaka ny fitsapana ary mitaky be dia be ny fianarana. Na izany aza, dia ny voalohany ANSI ISO / IEC vaovao fiahian'ny fiarovana fanadinana, izay mahatonga ny tena mahafinaritra amin'ny IT maro ary asa varavaran'ny, indrindra fa ny U.S. governemanta, izay mampiasa ny CISSP noho ny fanamarinana fitsipika.
Raha toa ianao ka manontany tena ny fomba hahazoana ny CISSP fanamarinana, azonao ampiasaina ireto torolalana. Anisan'ny takiana CISSP dimy taona ny asa traikefa na efa-taona ny asa traikefa sy ny efa-taona na mari-pahaizana ambony kokoa mifandray amin'ny saha. Ianao koa mba baolina 700 na ambony kokoa amin'ny indrindra ny iray 1000 Maty. Amin'ny 250 fanontaniana ao anatin'izany 20 tsy scoring antontan'isa fanontaniana, averages ity ny fitakiana ny momba ny 75% marina valiny.
Rehefa mizara ny fitsapana, manana sivy volana mba hamita ny sisa amin'ny fampiharana, izay ahitana ny mahazo ny fankatoavana avy amin'ny (ISC)² mpikambana, vita ny Fampiharana fankatoavana endrika ka hosoratany amin'ny fitsipi-etikan'ny. Ianao koa mba hanavao ny CISSP isaky ny telo taona amin'ny 40 CPE fanabeazana mitohy nahazoan-dalana isan-taona, na ny sokajy ny 120 amin'ny telo taona.
The CISSP fandaniana $549 raha hisoratra anarana mialoha ho amin'ny feno-enina ora fanadinana. Rescheduling fandaniana $50 ary ny fanafoanana ny vola lany $100. Azonao atao koa ny misafidy ny hampiharana ny CITREP hanome mba hahazo fanampiana amin'ny famatsiam-bola. Arakaraka ny toerana misy anao haka ny fitsapana, dia mety tsy maintsy mandoa fanampiny $50 fikarakarana saran'ny, rehefa manaiky ny fampiharana. Ianao koa tsy maintsy mandoa isan-taona $85 CISSP fikojakojana saran'ny. Ireo lany Tsy tafiditra ao anatin'ireo ny vola lany amin'ny fianarana na boky CISSP, izay tsy avy amin'ny ny fanadinana.
Fianarana Fa ny CISSP Exam
Zava-dehibe ny mianatra ny CISSP fanadinana, na dia efa za-draharaha tany an-tanimbarinao. The (ISC)² manome fiofanana maimaim-poana sasany fitaovana, fa ny ankamaroan'ireo safidy tsy manana fahafahana. CISSP fanofanana dia ahitana safidy fanatitra avy (ISC)² ary koa ny fiahian'ny antoko fahatelo mpampianatra sy Prep taranja.
CISSP boky dia azo amin'ny fampiharana fanontaniana, fampiharana fanadinana sy ny valiny fahatapahan'ny. The ofisialy (ISC)² Torolalana ho an'ny CISSP tsy ampy amin'ny hardcover ary toy ny eBook ho an'ny fianarana tena mora fidirana. Azonao atao ihany koa ny manao fitiliana misintona rindrambaiko, izay fiampangana fohy isaky ny manao fitsapana ny 25 fanontaniana.
Raha tsy tsara ny tena fianarana, Avy eo dia nisy antoko fahatelo Prep CISSP anefa no safidy hafa. Matetika dia ahitana ireo boky CISSP, manao fanadinana, fanontaniana banky, ary indraindray mpampianatra na ny mpitaiza fanampiana. The (ISC)Manolotra ² e-mianatra maro fahafahana ihany koa, anisan'izany ny 'E-Mianatra manontolo Course’ for $599 Mazava ho azy fa na ny olona modules ho an'ny $99 tsirairay, Afaka mifidy izay mifototra amin'ny raha tsy maintsy miborosy ny tamin'ny Domain iray na izy rehetra ireo.
Misy 17 CISSP ofisialy fanofanana mpamatsy ao amin'ny U.S. ary koa ny maro mpamatsy antoko fahatelo amin'ny lalina kokoa in-e-ny fianarana sy ny mpitaiza taranja. CISSP fampiharana fanontaniana dia azo avy amin'ny manam-pahefana (ISC)² rindrambaiko sy ny boky mpitari-dalana, na amin'ny alalan'ny antoko fahatelo Apps. Azonao atao ihany koa ny misintona fampiharana ny sasany fanontaniana sy ny fanadinana ho afaka amin'ny amin'ny (ISC)² namany Sary.
Jereo ny tsara indrindra amin'ny aterineto CISSP fanofanana taranja.
Nandray ny CISSP Exam
Ny CISSP fanadinana dia ahitana 250 fanontaniana nalaina tao amin'ny indrindra ny 6 ora. Mandalina monina manodidina ny valo sehatra ao anatin'izany:
Risk Management Security sy ny
Fiarovana ny Engineering
Fifandraisana sy Network Security
Identity sy ny Access Management
Security asan'ny fanahy
Sehatra tsirairay dia voazarazara ho eo an-maro modules amin'ny Mifantoka manokana, mamela anao hamaly ny zava-drehetra any amin'ny faritra manokana indray. Fanontaniana ireo ny ankamaroan'ny safidy maromaro, fa mety koa ho asaina mamaly fanontaniana voasoratra miankina amin'ny toerana misafidy ny handray ny fanadinana. Raha misy 250 fanontaniana, ihany 230 amin'izy ireo no graded, ary ny sisa 20 ny antontan'isa, fa tsy maintsy hahazoana azy rehetra marina mba hahazoana tonga lafatra 1000 Maty.
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny fitsapana vokatra natolotra avy mandritra ny fizotry Checkout, avy hatrany rehefa vita ny fanadinana ianao. Na izany aza, raha vokatra avy hatrany tsy misy, dia handray azy ireo amin'ny alàlan'ny taratasy tao anatin'ny indrindra ny valo herinandro.
Rehefa mandray ny Hita tamin'ny fandinihana natao, dia afaka mameno ny CISSP Fampiharana fankatoavana amin'ny porofo ny asa sy ny fanabeazana, ny fitsapana maro, sy ny fankatoavana avy amin'ny (ISC)² mpikambana. Tokony tsy ny fanadinana, dia afaka mandoa vola mba retake azy indray ao anatin'ny 30 andro, ho telo indrindra ny fitsapana ao anatin'ny iray taona.
CISSP Jobs sy ny fahafahana
CISSP voatondro ho mendrika ny olona maro ny asa toy ny fiarovana mpanoro-hevitra, fiarovana mpitantana, IT talen'ny sy ny mpitantana, fiarovana-panjakana, fiarovana mpanao mari-trano, fiarovana mpandalina, fiarovana amin'ny injeniera, vaovao lehiben'ny fiarovana mpiandraikitra, talen'ny fiarovana, tambajotra mpanao mari-trano, ary more. Satria misy asa indrindra CISSP Tsy mitovy ny fanondroana, fatran'ny karama mitovy be ihany koa somary, fa matetika miainga amin'ny $60,000-$120,000 isan-taona.
Ny CISSP dia nohajaina ary eken'ny be sy ny taratasy fanamarinana rehefa misy afaka manampy anao mba hanohy ny asa ao IT Sa, na inona na inona toerana ianao mitady. Ny fandalinana sy ny fanomanana ny tenanao ho amin'ny fanadinana dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mandeha amin'ny ambony indrindra azo atao isa. CISSP kokoa sy asa fiarovana an-tserasera vaovao eto.
April 5, 2018 /0 Comments/amin'ny James Edge
Sokajy://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/05/unnamed-1.png 500 500 James Edge Sokajy://crushtheinfosecexams.com/wp-content/uploads/2015/09/InfoSec-Logo1-300x41.png James Edge2018-04-05 17:08:002018-01-10 22:00:00CISSP Certification